मेरै कथा भैरे « ETV Khabar
मेरै कथा भैरे
Published On : 26 July, 2018 9:02 pm
On : अन्तबार्ता, मनोरञ्जन
फिल्म ‘भैरे’ यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनको क्रममा छ। यही सेरोफेरोमा अन्नपूर्ण सम्वाददाता सपना महर्जनले यसका नायक दयाहाङ राईसँग वार्तालाप गरेकी छन् स्
‘भैरे’ फिल्ममा तपाईंको कस्तो भूमिका छ ?
न्य मान्छेको भूमिकामा छु। तर, सोचमा अलि जिद्धी स्वभावको छु। जो आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट लागेको सहन सक्दैन। यो एउटा काल्पनिक क्यारेक्टर हो।
‘भैरे’ कस्तो फिल्म हो ?
वास्तवमा भैरे मेरो कथा हो। म पनि एउटा आममानिसबाट सिने क्षेत्रमा संघर्ष गरेर आएको हुँ। मजस्तो आममानिसको पनि कथा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भैरेमा छ। दर्शकलाई यो फिल्म हेर्दा आफ्नै कथाजस्तो अनुभव हुनेछ।
अहिले म ‘साइँली’ फिल्ममा काम गरिरहेको छु। फिल्मको पहिलो चरणको सुटिङ सकिएको छ। अब दोस्रो चरणको सुटिङमा व्यस्त हुन्छु।
सुरुमा फिल्म क्षेत्र प्रवेश गर्दा र अहिलेको दयाहाङमा के भिन्नता छ ?
अनुभव। सुरुमा म अनुभवी थिइनँ। फिल्मको बारेमा सामान्य ज्ञान मात्र थियो। त्यो ज्ञानलाई अहिले अनुभवले अलि विकसित गर्ने कोसिस गर्दैछु
तपाईंलाई युनिक हिरो भनिन्छ। नेपाली सिनेमामा दयाहाङजस्तै अर्को हिरो जन्मेला ?
मेरो स्वभाव, मेरो अनुभव र मेरो भोगाइ अरू कसैले पनि भोग्न सक्दैन। मभन्दा राम्रो काम गर्नेहरू यो क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्। तर, म मै रहनु भनेको मेरो भोगाइको कारण हो। २० वर्ष अघिको कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। जे कुरा मैले भोगेर आएँ, त्यो भोगाइ नेपाली सिनेमा र राजनीतिका लागि चासोको विषय थियो। अब मजस्तै नयाँ कलाकारको उदय हुन यस्तै उथलपुथल आउनुपर्ने पो हो कि ?
नेपालमा अर्गानिक सिनेमा वास्तवमै बनेका छैनन् ?
अर्गानिक सिनेमा केलाई भन्ने रु म अर्गानिक सिनेमा भेट्दिनँ। बरु कथा अर्गानिक हुन सक्छ। मौलिक कथावस्तु भएका सिनेमालाई अर्गानिक भनिए पनि वास्तवमा हाम्रा सिनेमा अर्गानिक बनिसकेका छैनन्।
तपाईंको पुस्ता आएपछि नेपाली सिनेमामा के कुरामा परिवर्तन भयोजस्तो लाग्छ ?
म यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा देशमा संकटकाल थियो। व्यावसायिक फिल्म धराशयी अवस्थामा थिए। त्यही समयमा ‘लुट’ आयो, नयाँ कथा लिएर। फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पार्‍यो। त्यसपछि नयाँनयाँ कथाको प्रवेश नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा हुन थाल्यो। नेपाली सिनेमा विश्व बजारमा पनि जान थाले। साथै लोकल नेपाली मार्केटमा पनि नेपाली फिल्म चल्न थालेको छ। विदेशमा भएका नेपालीले पनि नेपाली सिनेमामा लगानी गर्ने चासो देखाएका छन्।
नेपाली सिनेमा उद्योगमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू के के हुन् ?
हामीसँग संसारलाई नै चकित बनाउने कथा छन्। ती कथा भन्ने शैली पनि छन्। अहिले त हामी नेपाली सिनेमामा चरित्रहरू मात्र निर्माण गरिरहेका छौं। विश्व बजारले भर्खरै मात्र नेपालमा पनि सिनेमा बन्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउन थालेको छ। हामी पूरा आत्मविश्वासका साथ हाम्रा कथा पस्कन सकिरहेका छैनौं। कथामा मौलिकता ल्याउन सके विश्व बजारसम्म हाम्रा सिनेमा लान सक्छौं।
मौलिक भनिएका सिनेमामा पनि वास्तविक जीवन भेटिँदैन, किन होला ?
सिनेमा त फिक्सनकै एक रूप हो। अथवा निर्देशकको कथा भन्ने शैली हो। तर, दर्शकलाई कमजोर ठानिने परिपाटी छ। दर्शकले बुझ्दैनन् कि भनेर फिल्मको कथावस्तुमा मसला थप्ने काम गरिन्छ, जुन गलत हो।
अब नेपाली सिनेमामा काम गर्न दयाहाङ परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
परिवर्तन हुनुपर्ने थुप्रै ठाउँ देख्छु। कोसिस पनि गरिरहेको छु। मैले एक समुदायको चरित्र निर्वाह गर्दा अर्को समुदायले स्पष्ट बुझिदेओस् भन्ने लाग्छ। तर, मैले सोचेअनुसार आफ्नो चरित्रमा अझै परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो तर्फबाट परिवर्तन गर्ने सोचे पनि मलाई फरक चरित्र निर्वाह गर्ने फिल्मका स्क्रिप्ट नै आएको छैन।
कन्सुलर सेवा विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई समस्या पर्दा आफू भएकै ठाउँबाट सेवा लिन सजिलो
२७ जनवरी, हङकङ– पप आधुनिक गीत संगीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई सकेकी सुमधुर श्वरकी